မီးခိုးရောင် ၃ မျိုးကိုဝတ်ရန်အကြံဥာဏ်များ - ရောင်စုံ၊ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်ခါနီးပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဂျာကင်အင်္ကျီတွေနဲ့နွေးထွေးတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုစသုံးတော့တယ်။ ဤအချိန်တွင် Blazers များသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် ငါတို့မျက်မှောက်မဆုံးရှုံးရမယ် မီးခိုးမြူ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီရိုထဲမှာသော့ချက်ကျတဲ့အရာတစ်ခုပါ ငါတို့ကမှန်ကန်စွာသယ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲဒါဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အဲဒါတွေကိုစနစ်တကျမဖြည့်စွက်မိရင်လည်းဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
အစင်းပါသည့် blazers များ
2 အစင်းပါသည့် blazers များ
3 plazed blazers
အရောင်တောက်ပသည့်အင်္ကျီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မတ်မတ်တွင်ပြီးပြည့်စုံနိုင်သည်။ မျက်မှောက်၌သက်ရောက်မှုအတော်အတန်မြင့်မားသည်, သို့သော်သင်သတိရဖို့ရှိသည် ပေါင်းစပ်ဖို့အရိပ်၏ရွေးချယ်မှုအရေးကြီးပါသည် သက်တံလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ရိုးရှင်းတဲ့အရောင်ကိုစတိုင်ထားပါ။
အကယ်၍ သင်အရောင်တောက်နေသည့်အင်္ကျီ ၀ တ်ဆင်ထားပါကမိမိကိုယ်ကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးမသွားပါစေနှင့်။ သင်ကအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ, တီရှပ်သို့မဟုတ်ပိုလိုနှင့်အတူဖြည့်နိုင်ပါတယ်စုံလင်သောအရာ။
သင်ကပိုရဲလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ပုံစံတည်းထိနှင့်ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်ရွေးချယ် ငါသည်ဤမတ်မတ်အတွက်အဆိုပြုအဖြစ်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်သည် ASOS မှပုံနှိပ်ထားသောရှပ်အင်္ကျီ၊ စတိုးဆိုင်တစ်ခုတည်းမှအဝါရောင်ဘလိတ်ဇာနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီအချို့ကိုပေါင်းစပ်ထားပါသည် ကျွန်တော့် နှင့်အချို့ Kurtgeiger ဘွတ်ဖိနပ်.
သင်ကဝတ်ဆင်ရန်ရွေးချယ်ပါ လွင်ပြင်တီရှပ်သို့မဟုတ်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အတူ, သင်တို့ကိုငါပေါင်းစပ်နိုင်အခြားအဝတ်အစားအဆိုတင်သွင်း။
သင်တစ် ဦး ပန်ကာဖြစ်လျှင် preppy စတိုင်, ဒီမီးခိုးတံပိုးသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ဒီဘလဇာ ၎င်းသည်အလွန်ဘက်စုံသုံးသော်လည်း၎င်းသည်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည် ဘယ်တော့မှမပျက်ကွက်ဘူး အတူဝံ့ နှစ်ဆရင်သားကင်ဆာ ဒီလာမယ့်ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ကဘယ်လောက်ဖက်ရှင်ကျနေမှာလဲ။
Blazer သည်အစင်းဖြစ်နေသောကြောင့်သင်မှောင်မိုက်သောအရောင်များကိုဝတ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီစတိုင်လ်မှပြီးပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်အဖြူသို့မဟုတ်အဝါရောင်ဘောင်းဘီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝတ်စုံမှာကျွန်တော့်အဆိုပြုချက်ကအဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီပါဝင်တယ် အမေရိကန်အဝတ်အစားမှကြက်သွေးရောင်နှင့်အတူအစင်း blazer Hackettမှသဲရောင်စုံဘောင်းဘီ Topman နှင့်အချို့သောအညိုရောင်ဖိနပ် Topman.
ဒါဟာနောက်ဆောင်း ဦး ရာသီဂန္ထဝင်လည်းဖြစ်သည် သင်သည်နောက်လာမည့်ရာသီ၌သင်၏ပုံမှန်အသွင်အပြင်နှင့်ရောနိုင်သည်။ သင်ပေါင်းနိုင်သည် monochrome သို့မဟုတ်ရောင်စုံပန်းချီကားများ။ monochrome အနေဖြင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သည် အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ ရေတပ်အပြာသို့မဟုတ်အဖြူရောင်။ သူတို့ဟာဒီနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးစံပြဖြစ်တဲ့ဘောင်းဘီတိုနဲ့ ၀ တ်ဆင်ထားကြတာပါ အချို့သောဖိနပ်များမှလာသည်။ ဒီဟာစက်တင်ဘာလနေ့လည်ပိုင်းမှာငါရွေးထားတဲ့အင်္ကျီဖြစ်ပြီး ASOS တီရှပ်၊ တူညီသောအွန်လိုင်းစတိုးမှ blazer ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်, ဘာမြူဒါဘောင်းဘီတို Topman နှင့်အချို့သောဖိနပ် Reissonline.
သင်မြင်သည့်အတိုင်း Blazer ကိုနည်းပေါင်းတစ်မျိုးဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စတိုင်နှင့်သင်နှစ်သက်သောအရာအပေါ်မူတည်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » ပုံ » သဘောထားတွေ » ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အစင်းခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်း
Hugo ဒံယလေက Lemus ဟုသူကပြောသည်
Hugo Daniel Lemus ကိုပြန်သွားပါ